အလင်းရောင်ကြယ်များ: +18 Website တွေမှာ ပလူပျံလာတဲ့ အနုပညာသည်များရဲ့ ပုံ နှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို တိုက်ဖျက်လာသော အနုပညာလောက
Model: No Yar
အရေးယူထောင်ချခြင်းခံရမည်.။သို့မဟုတ်ပါက မိမိနေချင်သလိုနေ လုပ်ချင်သလိုလုပ်၍ ရခြင်းကို ဒီမိုကရေစီဟုခေါ်သည် ဟု သတ်မှတ်နေသည်မှာ လွန်စွာ သနားဖွယ်ကောင်းလှသည်။
Model Girl : Chan Chan
မြန်မာလူမှူပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချစ်သူချင်း Kissing နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့စုပ်နမ်းခြင်းကို ဗြောင်ပြူလုပ်လာသည်.။အနုပညာရှင်များကလည်း ယခင်က ဆင်ဆာမိ၍ ခိုးထွက်လာသော +18 သီချင်းများကို ဗြောင်ပင် စင်ပေါ်တတ်ဆိုလာသည်။လမ်းမပေါ်၌ ဆိုင်ကယ်အုပ်စုမောင်းခြင်းများ ယာဉ်စည်းကမ်းနှင့် မညီညွှတ်သော နည်းလမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ကို ဒီမိုကရေစီအားသားချက်ဟု ထင်နေသည်..။
Model: Thuzar Mg
Ref. Ko Ye စာမျက်နှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 1/27/2013 04:26:00 am